‘साइन्स’ लाई पनि ब्राण्ड बनाउँछौंः कोअर्डिनेटर::Hamro Koshi Awaj / awaz
‘साइन्स’ लाई पनि ब्राण्ड बनाउँछौंः कोअर्डिनेटर
धरानको युएन, नवोदय कलेजमा पहिलो वर्षमै ‘स्कुल टपरहरु’ ‘साइन्स’ पढ्न आए (भिडियोसहित)
धरानः म्यानेजमेण्ट र होटल म्यानेजमेण्टमा पूर्वमैै नाम कमाएको युएन, नवोदयले यसै विषयमा ‘ब्राण्ड’ पनि बनाएको छ । होटल म्यानेजमेण्टसँगै बिएचएम पनि भित्रयाएको कलेजमा होटल म्यानेजमेण्ट र बिएचएम कहाँ पढ्ने भन्ने विषयमा विद्यार्थीलाई चिन्ता हुने गरेको छैन ।
अहिले पूर्व झापादेखि पश्चिममा ओखलढुङ्गासम्मका विद्यार्थी यहाँ होटल म्यानेजमेण्ट र बिएचएम अध्ययनका लागि आइपुग्छन् । यी विषयमा राम्रो नतिजा ल्याएर विद्यार्थीले प्रदेश नं. १ टप गर्दै आएको हुनाले पनि यो कलेज ब्राण्ड नै बन्यो भन्दा अत्युक्ति नहोला । युएन, नवोदयमा म्यानेजमेण्ट, होटल म्यानेजमेण्ट, बिबिएस, बिएचएम साथै यस वर्षदेखि साइन्स, कम्प्युटर साइन्स साथै फुड एण्ड न्युट्रीसन विषय पठनपाठन हुने भएको छ । कलेजका साइन्स कोअर्डिनेटर आकाश अधिकारीसँग यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अहिले दिनहरु कसरी बित्दैछन् ?
–अहिले मेरो धेरै समय कलेजमै बित्छ । यही कलेजको साइन्स कोअर्डिनेटरको हिसाबले लागेको हुनाले यसतर्फ नै मेरो ध्यान छ ।
‘म्यानेजमेण्ट’ तर्फ ध्यान दिँदैछु ।
यसअघि कहाँ अध्यापनरत हुनुहुन्थ्यो ?
–त्रिविबाट डिग्री गरिसकेपछि करिअरको सुरुवात मैले विश्व आदर्श कलेजबाट गरेको हुँ ।
कस्तो लाग्छ युएन कलेज ?
–विशेषतः यो म्यानेजमेण्टमा ‘ब्राण्ड’ बनाउने उद्देश्यले खोलिएको कलेज हो । जहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याइएका छन् । त्यसैले त्रिविबाटै ल्याइएको विज्ञान सङ्काय अर्थात् साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीलाई पनि ब्राण्ड बनाउनुपर्छ भन्ने ध्येयले लागेका छौं ।
कस्ता विद्यार्थी कलेजमा आइरहेका छन् ?
–अहिले मार्केटतिर यस्तो खालको म्यासेज गलत म्यासेज जाँदो रहेछ कि– पहिलोपटक खुलेको हो आदि इत्यादि । हामीले यसलाई चुनौती र अवसर दुवैका रुपमा हेरेर मिहिनेत गरेका छौं । अहिले विद्याभुषण स्कुल धरानका टपर निरन्जन चौधरी, युएन स्कुलका मुएहाङ लावती, आरन राई, जेनिथ स्कुल धरानकी स्कुल टपर तेमुक्षा लिम्बू, अरनिको सेकेण्डरी स्कुल तेह्रथुमका पुजन सुवेदी, सत्य शिशु निकेतन स्कुल धरानकी ऋतिका सेन्चुरी, इष्ट वेष्ट तरहराकी आरोशा राई, नवोदय विद्या मन्दिर धरानका सुशन जिमी, चन्द्र संस्कृत स्कुलका दीपेन भण्डारी, श्री सावित्री सेकेण्डरी स्कुलकी स्वेता पुलामी मगर, माउण्ट मोरिया स्कुल धरानकी सेविका राईलगायत धेरै स्कुल टप गर्ने विद्यार्थी साइन्स पढ्न आइरहेको पाइएको छ । भनौं, धरानको युएन, नवोदय कलेजमा ‘साइन्स’ पढ्न पहिलो वर्षमै स्कुल टपर आए ।
यहाँका अध्यापकबारे भन्नुपर्दा ?
–हात्तिसार क्याम्पस, धरानका अन्य कलेजमा लामो समयसम्म अध्यापन गराइरहनुभएका दक्ष, अनुभवी अध्यापकहरु हुनुहुन्छ । यस्तै, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका डाक्टर श्रवणकुमार मण्डल, पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसका इन्जिनियर शेखर लिम्बूलगायतले पनि कलेजमा विशेष शिक्षा प्रदान गर्नुहुनेछ । उहाँहरुकै निर्देशनमा विद्यार्थी कसरी डाक्टर र इञ्जिनियर बन्न सक्छन् भन्नेबारेमा ज्ञान प्राप्त हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं ।
विद्यार्थीले साइन्स नै किन पढ्ने ?
–साइन्स पढेका विद्यार्थीले अरु फिल्डमा पनि काम दिन्छ । अहिले विज्ञान, प्रविधिविना जीवन सम्भव छैन । व्यक्तिको जीवनसँग मात्र होइन, देशको विकासमा पनि साइन्स जोडिएको छ । देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक यी सबै क्षेत्रको विकासमा साइन्सको महत्वपूर्ण योगदान छ । हाम्रो जस्तो देशमा त अझ महत्वपूर्ण रहेको छ । साइन्सविना विकास सम्भव छैन । साइन्स अहिले सभ्यता भइसकेको छ । साइन्स विषय सबैले पढ्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, साइन्ससम्बन्धी ज्ञान सबैमा हुनु आवश्यक छ । साइन्स र व्यवस्थापनले एकअर्कालाई सहयोग पुरयाएका हुन्छन् । साइन्सको ज्ञानलाई व्यवस्थापन गर्न पनि व्यवस्थापन अध्ययन गरेकालाई सहयोग हुन्छ । साइन्सले हाम्रो जीवनशैलीका धेरै विषयलाई नियन्त्रण गर्छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कृषि विकासका साथै मानव सभ्यतामा परिवर्तन गर्न विज्ञान तथा प्रविधिको योगदान बढी हुन्छ ।
त्यसैले पनि एसईईपछि सकेसम्म उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दा विज्ञान विषय रोज्नु राम्रो हुन्छ । प्लस टुमा साइन्समा फिजिक्स, केमेस्ट्री र बायोलोजी तीनवटा मेजर विषय हुन्छन् । फिजिक्स ग्रुपकाले फिजिक्स, केमेस्ट्री र म्याथम्याटिक्स पढ्नुपर्छ । यसमा केही अंश बायोलोजी पनि हुन्छ । त्यसैगरी, बायोलोजी ग्रुप पढ्नेले जुलोजी, बोट्नी केमेस्ट्री र फिजिक्सका विषयहरू पढ्नुपर्छ । यो ग्रुपकाले थोरै भए पनि म्याथम्याटिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ ।
कक्षा–११ र १२ मा दुईवटा स्किम हुन्छ । भोलि के र कस्तो करिअर बनाउने भन्ने फरक स्किमले निर्धारण गर्छ । कक्षा ११ मा कम्प्युटर स्किम रहेको छ । यो स्किममा फिजिक्स, केमेस्ट्री, म्याथ, इंग्लिस र कम्प्युटर साइन्स पढ्नुपर्छ । यस्ता विद्यार्थी इन्जिनियरिङ अध्ययनमा जान सक्छन् । जनरल साइन्स बिएससी, एमएससी पनि अध्ययन गर्न सक्छन् । कम्प्युटर साइन्स स्किमका विद्यार्थीले कक्षा १२ मा फिजिक्स, केमेस्ट्री, म्याथ र इंग्लिस र अनिवार्य नेपाली विषय अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, अर्को स्किमका विद्यार्थीले कक्षा ११ मा फिजिक्स, केमेस्ट्री बायोलोजी, म्याथ, इंग्लिस विषय अध्ययन गर्नुपर्छ । १२ मा फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलोजी र इंग्लिस, नेपाली अनिवार्य छ । यो स्किमका विद्यार्थी भोलि मेडिकल क्षेत्रमा जान सक्छन् । जनरल साइन्स पनि पढ्न सक्छन् । यो स्किमका विद्यार्थीले म्याथ नपढ्न पनि सक्छन् । अतिरिक्त म्याथ लिएमा इन्जिनियरिङतिर जान सक्छन् ।
अझै भन्छु– साइन्स नेपालको आवश्यकता हो । विज्ञान विषय छनोट गरी अध्ययन गर्दा उनीहरूको करिअर पनि राम्रो हुन्छ । प्लस टुमा साइन्स पढेका विद्यार्थी म्यानेजमेन्ट, ह्युमानिटिजजस्ता क्षेत्रमा पनि जान सक्छन् । तर, प्लस टुमा म्यानेजमेन्ट वा ह्युमानिटिज पढेर माथिल्लो तहमा साइन्स पढ्न सकिँदैन । भोलि स्नातक तहमा जुनसुकै क्षेत्रमा जान पनि सकिन्छ ।
साइन्स पढ्न कत्तिको मिहिनेत आवश्यक छ ?
आवश्यक छ । साइन्स भन्ने बित्तिकै सबैको मनमा एकदमै गाह्रो विषय हो भन्ने लाग्छ । आमाबुवाको इच्छा छोराछोरीलाई साइन्स पढाउने हुन्छ, विशेष गरी स्कुल लेभल पार गरेपछि । थोरै प्रतिशत (ग्रेडिङ) आयो भने साइन्स पढ्न सक्दैन भन्ने उनीहरुको बुझाइ हुन्छ र आयो भने साइन्स पढ्नै पर्छ भन्ने हुन्छ । तर यी कुराहरु भ्रम मात्र हुन् ।
पहिलो कुरा विद्यार्थीमा साइन्स पढ्ने इच्छा हुनुपर्दछ, विद्यार्थी मेहेनती, इमान्दार एवं अनुशासित हुनुपर्छ, साइन्स पढ्न धेरै मेहेनत गर्नुपर्ने भएकाले समयको अभाव सधैं भइरहन्छ । तसर्थ धेरै समय पढाइकै लागि दिन सक्छु भन्ने सोच पाल्नुपर्छ, सेल्फ अध्ययन जरुरी छ, परीक्षा आँउदा मात्र पढ्ने बानी छ भने त्यो हटाइ हाल्नुपर्छ, पढ्ने भन्दा लेख्ने बानी बसाल्नुपर्छ, कलेज भरसक निरन्तर हुनुपर्छ, अभिभावकले पनि आफ्नो बच्चाको निरन्तर ख्याल गर्नुपर्छ । यी कुराहरु जानेबुझे मात्रै पनि साइन्स पढ्न सकिन्छ ।
धरान शैक्षिक केन्द्रकै रुपमा विकास भएको छ नि ?
–अवश्य पनि धरान शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास भएको छ । तर पनि अहिले धेरैजसो पुरानै ढाँचा, पुरानै शैलीमा अल्झिरहने परम्परा कायमै छ । हामी त्यसलाई चिर्न चाहन्छौं । सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्रै अल्झियो भने विद्यार्थीले प्रगति गर्न सक्दैन । व्यवहारिक ज्ञान अहिलेको आवश्यकता हो । जड कुराचाहिँ के हो भने व्यवहारिक ज्ञानविना अहिलेको शिक्षा क्षेत्र अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले पनि धरानलाई अझै शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न व्यवहारिक ज्ञानको खाँचो छ ।
–हामी विश्वासघात गर्ने काम गर्ने छैनौं । जसरी युएन, नवोदयले अभिभावक, विद्यार्थी, अध्यापककै सपोर्टले होटल म्यानेजमेण्ट र म्यानेजमेण्टमा ब्राण्ड बनायो, त्यस्तै साइन्समा पनि ब्राण्ड बनाउने लक्ष्य छ । यसलाई पूरा गर्नका लागि सबैको साथ र सहयोग जरुरी भएकोले त्यसको अपेक्षा गर्दछौं । साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो सबै टिम ‘क्वालिटी एजुकेशन’ मै विश्वास गर्ने छ, त्यो क्वालिटी र विश्वासलाई जितिरहनेछौं ।